Mazai akatsemurwa ane howa, ham nemaprawuni; yakapusa uye yakajeka | Kicheni Mapepa
Yakapwanyika mazai ane howa, prawns uye ham
Mazai akatsemurwa anotikoka kuti titambe nezvakagadzirwa; howa, crustaceans uye miriwo zviri pakati pezvinhu zvakajairika mukugadzirira kwayo. Iyo inodzokororwa zvakanyanya pamba hapana mubvunzo kuti iyo mazai akakwenya ane howa, ham nemaprawuni; mubatanidzwa wakareruka uye wakanaka panguva imwe chete.
Iko hakuna zvakavanzika zvekuita kukakavara kwakanaka; ingova neyakanaka mbishi zvinhu uye shandisa yakafanira mwaka yekuwedzera kunhuwirira kwayo. Ini ndinonyanya kuda kuwedzera iyo zai kubva mumoto uye kuti inobika nemoto unosara; Iyi nzira haina kumisikidza nekukurumidza uye tinowana mhedzisiro uye inonatsa mhedzisiro yekuravira. Kana iwe uchida mhedzisiro, zvakare edza zucchini kana bhinzi yegirini, zvine hutano chaizvo!
Kune vanhu vaviri
125 g. yakatemwa howa
25 g. shrimp
1 ruoko rwe ham cubes
Isu tinocheka iyo sliced ​​garlic uye fry mumafuta. Isu tinovarega vari brown uye kubvisa vasati vatanga kupisa.
Mupani rimwe chete, saute the howa kusvikira nyoro.
Saka, tinowedzera ham uye mapera akachekwa uye saute kwemaminetsi mashoma kuitira kuti zvinwiwa zvibatanidzwe.
Pakupedzisira, isu tinosanganisa iyo mazai akarohwa nemwaka. Isu tinobvisa pani kubva pamoto uye nemoto unopisa tinorega zai ribike, isu tichimutsa musanganiswa.
Shumira nekukasira, ugoisa garandi yakakangwa kumusoro uye nekusasa zvishoma parsley yakagurwa.
Mamwe mashoko - Sautéed Zucchini
Nguva yekubika 12 maminitsi
Yese nguva 18 maminitsi
Kilocalories pakushanda 190
Mapinda Anopisa, Mapepa ane Mushroom
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Yakapwanyika mazai ane howa, prawns uye ham
Guijuelo ham akadaro
Nezvinhu izvi ... Chii chisina kunaka? Iresipi yakapusa uye inonaka, ndinoida !!
Pindura Jamón de Guijuelo
Ham Cutter Iván Martínez Burgués akadaro
Iyi kamukira inotaridzika chaizvo. Zvinotaridzika kuita zviri nyore, saka ndichazviedza kumba kwangu.
Pindura kuna Ham Cutter Iván Martínez Burgués
Bhinzi dzegirinhi pamwe nemadomasi akazvigadzirira uye mazai evha